Real Madrid oo guul ay u qalantay ka soo heshay Barcelona kulankii la wada sugayay ee El Clásico… +SAWIRRO – Gool FM
Dajiye October 25, 2020
(Barcelon) 24 Okt 2020. Real Madrid ayaa guul ay u qalantay ka soo heshay Barcelona kulankii la wada sugayay ee El Clásico, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-3, kulan ka tirsanaa horyaalka La Liga ee dalka Spain
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbardhac 1-1 ah ay isku mari waayeen labada kooxood Barcelona iyo Real Madrid.
Daqiiqadii 5-aad kooxda martida aheyd ee Real Madrid ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta, waxaana -0-1 ka dhigay Federico Valverde, kaddib markii uu goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Karim Benzema.
Laakiin daqiiqadii 8-aad kooxda Barcelona ayaa heshay goolka barbardhaca waxaana 1-1 ka dhigay da’ayarka reer Spain ee Ansu Fati, waxaana goolkan ka caawiyay Jordi Alba.
Daqiiqadii 63-aad kooxda Real Madrid ayaa heshay rigoore waxaana gool u badelay kabtanka kooxda ee Sergio Ramos, waxayna ciyaarta sidaas ku noqotay 1-2 ay ku hoggaamineysay Los Blancos.
90 daqiiqo marka ay ciyaartu aheyd kooxda Real Madrid ayaa sii dheereysatay hoggaaminta ciyaarta, kaddib markii uu 1-3 ka dhigay Luka Modric
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 1-3 ay kaga soo adkaatay Real Madrid kooxda Barcelon oo ay ku booqatay garoonka Camp Nou, kulankan ayaana qeyb ka ahaa Isbuuca Lixaad horyaalka La Liga ee xilli ciyaareedkan